Ibhola le-Menthol, i-Cigarette Pops, i-Menthol Capsule - i-Dayang
Ukuthembela kusayensi nobuchwepheshe ekuthuthukisweni kanye nokuhlinzeka abasebenzisi njalo ngemikhiqizo yobuchwepheshe obuphezulu egculisayo kuwumsebenzi wethu njalo.
I-DAYANG ikhethekile kwe-R&D, ukukhiqizwa nokumaketha kwemikhiqizo yejeli. Isibonelo, amaphilisi kagwayi, i-pop breath gum , kuzoba nemikhiqizo emisha engu-3-5 esohlwini lwanyanga zonke. Imikhiqizo ithunyelwa eYurophu, eMelika, eNingizimu-mpumalanga Asia nakwamanye amazwe emhlabeni jikelele.
Isifaki Sebhokisi Somshini Wokuqhumisa Ugwayi ...
I-Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd inamandla obuchwepheshe aqinile kanye nebhizinisi lesimanje elihlanganisa umklamo, ukuthuthukiswa, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nenkonzo. Ineqembu elisebenza kahle, eliqeqeshiwe nelincomekayo. Le nkampani igxile kakhulu ku-R & D nasekuthengisweni kwemikhiqizo yomkhiqizo we-DAYANG. Kusukela ngo-2009, inkampani ibithumela ukuthengisa kwamanye amazwe, futhi amakhasimende ayo abesemhlabeni wonke.
Ugwayi onama-flavour capsules...
Ngo-2020, ukuhlaziywa kwe-Euromonitor kwalinganisela yonke imakethe ye-menthol yase-Europe ukuthi ibiza cishe i-EU € 9.7 billion (US $ 11 billion, cishe i-UK £ 8.5 billion). Inhlolovo ye-International Tobacco Control (ITC) ngo-2016 (n=10,000 abantu abadala ababhemayo, emazweni angu-8 ase-Europe) yathola ukuthi ...
IShijiazhuang Dayang Bioengineering Co...
I-Shijiazhuang Dayang Bioengineering Co., Ltd. ithuthukisa imikhiqizo emisha muva nje. Imikhiqizo emisha ihlanganisa ukunambitheka kobuhlalu obusha obuqhumayo, imibala emisha yobuhlalu obuqhumayo, kanye nemishini ehlukahlukene ye-bolus ukukusiza ukuthi uguqule ngokushesha usikilidi ube ugwayi obuhlalu obuqhumayo. Okwen...
I-Menthol Balls For Cigarettes iyahamba...
I-Flavour: I-Menthol Balls For Cigarettes izokwethula i-Blueberry, Mint, Fruit, Ice flavour emangalisayo kagwayi wendabuko ukuze ujabulele ukunambitheka okunephunga elimnandi. Inketho engcono kakhulu yawo wonke umuntu owazi iphunga elinamandla. Yebo sinenye ithoni, sino-7...